Wasiirka Arrimaha Gudah Somaliland oo markii ugu horreysay ka hadlay tallaabooyinka ay dawladdu ka qaadday dilkii Saameel | Berberanews.com
Home WARARKA Wasiirka Arrimaha Gudah Somaliland oo markii ugu horreysay ka hadlay tallaabooyinka ay...
Wasiirka Arrimaha Gudah Somaliland oo markii ugu horreysay ka hadlay tallaabooyinka ay dawladdu ka qaadday dilkii Saameel
Hargeysa-(Berberanews)- Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Nuur Carraale Duur, ayaa markii ugu horreysay ka hadlay illaa hadda tallaabooyinka ay ka qaadeen dhinaca loo tiranayo inay geysteen dil laba habeen ka hor ka dhacay Deegaanka Saameel oo saddex qof lagu khaarajiyey, hal qof oo ka dambeeyey iyo halka xilligan ay wax marayaan.
Wasiir Duur waxa uu sheegay inay dhacdadaa u xidh-xidheen dad badan oo baadhis lagu wado, waxaanu xusay inay Weftiga dawladda ka socda ee sugan deegaannada Ceel-Bardaale ee Gabiley iyo Dila dhexdooda, isla markaana ay wax isla af-garteen. “Waayeelkii goobta joogay ee aanu goobta kula kulanay ay wax ka dhaceen, runtii waxaannu isla garanay laba qodob, midka koowad waxa weeye in Xukuumadda laga sugo sidii ay tallaabo u qaadi lahayd waqti la siiyo oo loo qabqaban lahaa dembilayaashi iyo dadkii falka geeystay, waa in aan xaaladda wax dambe oo beddalaa dhicin.” Ayuu yidhi Wasiirka arrimaha guduhu.
Wasiir Duur, waxa uu nasiib-darro ku tilmaamay in ballantaa iyo go’aankaa la isla qaatay ka dib uu haddana shalay dil dhacay. Wasiirka oo arrintaa ka hadlayaana waxa uu yidhi; “Nasiib-darro Shalay dhacday ballantii ahayd in aan wax dambe dhicin oo ay wax iska beddeleen oo hal qof la dilay oo qofka la dilaynaa uu ka soo jeedo dhinicii loo tirinaayay falkii hore ee saddexda qof loo lagu dilay oo ay dadkii hore ka soo jeedaan. Qofkan dhintay dhammaantood Illaahay ha u naxariistee wuxuu ka soo jeeda gobolka Gabiley.”
“Waayeelkii aanu goobta kula kulanay oo qofka wax gaadhanbaa loo tacsiyeeyaa iyagaannu shalay ku horraynay oo aanu tacsida gaadhsiinay. Waxaanan ka codsanay in aanay waxba dhicin, laakiin waxa shalay dhacay falka dilka ah oo isaguna qof kala dhintay, waxaanu rejiynaynaa Xukuumad ahaan aanu ugu baaqaynaa dadka shacabka ah ee walaalaha ee wada dega in fidnada halkaa lagu joogiyo.” ayuu yidhi Wasiirku.
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Nuur Carraale (Duur) oo ka hadlayey dhabbaha nabadda ee ay halkaa uga sii gudbeen, waxa uu yidhi; “Saaka waxaanu wadnaa in labada dhinacbaa aan la kulmo oo nabadii waddddii loo mari lahaa aanu ka wada hadallo. Waxa kale oo aanu goobta gaadhsiinay ciidan aad u badan oo ciidanka Booliska ah in kasta oo deegaanku yahay deegaan aad u ballaadhan oo dad walaalo ah oo isku dhex jira ay yihiin haddana waxaanu geynay ciidan Boolis ah oo xooggan oo wata baabuur gaashamaan, waxaanu labada dhinacba ka codsanaynaa in ay si wanaagsan noola shaqeeyaan.” Wasiir Duur waxa uu sidaa ku sheegay Waraysi uu galabta siiyey Laanta Af-Soomaaliga ee Idaacadda BBC-da, isaga oo Hargeysa ku sugan, ka dib markii uu isla maanta ka so laabtay deegaanka Buqdhada oo uu laba habeenba ku sugnaa, waxaanu Wasiirka oo hadalkiisa sii wataa yidhi; “Sidoo kale, dadka warbaahinta hadallada dhiifta leh iyo wax kala fogaynaaya leh iyo warbaahinta hadalladaa soo gudbinaysaba waxaanu rejaynaynaa inay joojiyaan oo dadka walaalaha ah nabadda lagala shaqeeyo oo aan la kala fogayn ee la isku soo dhaweey. Haddii ay wax dhacaan waxay u baahan tahay in aan dhiig kale lagu darin ee wanaagga la qaato oo khaladku intii uu ku dhacay laga garnaqsado, la isku yimaaddo waana taannu hadda wadno.”
Mar uu Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ka hadlayey tallaabada ay dawladdu arrintaa illaa hadda ka qaadday waxa uu yidhi; “Runtii tallaabanu qaadnay oo dad baanu qabqabanay, dadkaanu qabqabanay waxa weeye illaa ay wax ku caddaadaan dembilayaal maaha tuhun iyo baadhis ayaannu wadnaa. Ciddii ay wax ku caddaadaan waxaannu marinaynaa tallaabo sharciga waafaqsan, ciddii aanay waxba ku caddayna waanu iska sii daynaynaa oo xorriyaddooda ayay heli doonaan oo baadhistii ayaa socota. Laakiin, annaga waxa naga go’an fal haddii uu dhaco in aannu tallaabo qaadno oo aanay suurtagal ahayn qof gacan ku dhiigla ah oo dhiig daadiyey in aannu ummadda dhex-mushaaxin way naga go’aan tahay Xukuumad ahaan.”
Previous articleVideo: Berbera oo lagu soo dhaweeyay Ururka RAYS oo ka mid ah tartamaayaasha ururadda siyaasadda iyo golaha deegaanka
Next articleLa-taliyaha Madaxweyne Silaanyo ee Arrimaha Siyaasadda oo ka hadlay xadhigiisa